Chelsea iyo Inter Milan oo ku dagaalamaya xiddig ka tirsan kooxda Lazio - Hargeele - Wararka Somali State
Chelsea iyo Inter Milan oo ku dagaalamaya xiddig ka tirsan kooxda Lazio
(Roma) 18 Mar 2020. Kooxaha Chelsea iyo Inter Milan ayaa ku dagaalamaya saxiixa xiddig ka tirsan naadiga kubadda cagta ee Lazio, kaasoo soo jiitay dhamaan indha kooxaha caalamka oo dhan.
Qaab ciyaareedka daafaca kooxda kubadda cagta Lazio ee Francesco Acerbi ayaa soo jiitay kooxo badan ee qaarada Yurub kaddib markii uu horumar xoog leh sameeyay.
Francesco Acerbi ayaa ka mid ah tiirarka ugu wanaagsan Lazio taasoo ka caabisay kooxda ka dhisan caasimada Talyaaniga ee Roma inay u tartanto hanashada horyaalka Serie A xilli ciyaareedkan.
War sidaha “FC Inter News” ee dalka Talyaaniga ayaa wuxuu tilmaamay in wax qabadka Francesco Acerbi ay si xoogan u arkootay kooxda Inter Milan, waxayna isku dayi doontaa inay gacanta ku dhigto adeega daafacan reer Talyaani xagaaga soo socda.
Balse Inter Milan ayaa loolan xoogan ee ku aadan saxiixa Francesco Acerbi waxay kala kulmi doontaa qaar ka mid ah kooxaha Yurub, oo ay hogaamiso Chelsea, si ay ula soo wareegaan daafacii hore kooxaha AC Milan iyo Chievo.
32 jirkan ayaa heshiiska uu ku joogo kooxda Lazio wuxuu ku egyahay ilaa iyo bisha June 2023, xiddigan ayaana ka qayb qaatay 24 kulan oo xilli ciyaareedkan ah, wuxuuna dhaliyay 2 gool.
Ardayda wax barata Jaamacadaha Dalka Uganda oo loo qabtay kulan wacyi gelin ah “SAWIRRO”
Citing coronavirus fears, Israel suspends immigration of 250 Ethiopians – The Times of Israel
Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Kooxda Real Madrid oo u geeriyooday Coronavirus
RASMI: Isku aadka siddeed dhammaadka Copa del Rey oo la sameeyey… (Yaa lagu beegay Kooxaha Real Madrid iyo Barcelona?)